Google Chrome and Mouse middle button shortcuts | TechSectors
5:33 AM LeaveaComment
ကျွန်တော်တို့ Mouse ကို ဘာအတွက် သုံးနေကြသလဲ ??
ကျွန်တော်အရင်က သိပ်မစဉ်းစားမိဘူး - ကွန်ပြူတာ စသုံးခါစက ကွန်ပြူတာနဲ့ တွဲပါလာလို့ သုံးတယ်လို့ပဲ မှတ်ထားတာ - ဘယ်လောက်ထိ တုံးသလဲ ဆိုရင် Mouse ကွန်ပြူတာမှာ တပ်ထားတာ မတွေ့ရင် ဘာမှကို မလုပ်တတ်တော့တဲ့ အဆင့်ထိပဲ - - တကယ်ကို အဲလို ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ် - တစ်ခါတစ်လေ ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ ကိုယ့်လောက်မသိသေးတဲ့ သူတစ်ယောက်ယောက် မေးလာရင် သူ့ကွန်ပြူတာမှာ Mouse မပါလာတဲ့ အခါ - Mouse မှ မပါလာတာ ကျုပ် ဘယ်လိုလုပ်ပေးလို့ ရမှာလဲ ဆိုပြီး အတည်ပေါက်နဲ့ ဟောက်ခဲ့ဖူးသေးတယ် ( ဆိုလိုတာ ကိုယ့်အပြစ်မဟုတ်ဘူး သူ့ကွန်ပြူတာ အပြစ်ပေါ့ ) ဒီလောက်ဆို ကျွန်တော် ဘယ်လောက်ထူသလဲ သိလောက်ပြီ
တကယ်တော့ ကွန်ပြူတာမှာ လည်ပတ်ပေးနေတဲ့ ကိစ္စရပ်တော်တော်များများက Mouse မပါပဲနဲ့လည်း စီမံခန့်ခွဲလို့ ရတယ် - ကျွန်တော်တို့က Mouse ကြီး ဘေးနားမှာ ရှိနေလို့သာ Keyboard shortcuts ဆိုတာတွေကို စိတ်မဝင်စားပဲ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်နေကြတာ - တကယ်က အဲလို မဖြစ်သင့်ဘူး - Mouse ကို ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုရတဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က OS ထဲမှာဖြစ်ဖြစ် - အင်တာနက်ထဲ ဝင်လို့ Webpage ပေါ်ရောက်တဲ့ အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ် - လုပ်ဆောင်စရာ ရှိတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို မြန်မြန်မှန်မှန်နဲ့ အချိန်ကုန် သက်သာအောင် စီမံခန့်ခွဲနိုင်စေဖို့ပါ - OS ထဲမှာ ဆိုရင်လည်း Mouse မပါပဲ သုံးလို့ရအောင် ဖန်တီးပေးထားပြီးသား Keyboard shortcuts တွေ အပြည့်အစုံ ရှိသလို - တစ်ခြား Apps တွေမှာလည်း သူ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့သူ အသင့် ပြင်ဆင်ပေး ထားပြီးသား Keyboard shortcuts တွေ အပြည့်ရှိပါတယ် - ဒါပေမယ့် Keyboard shortcuts ဆိုတာ သိထားဖို့သာ သင့်တာ တကယ်တမ်း သုံးရင် လက်ပေါက်ကပ်တာတော့ အမှန်ပဲ - တစ်ချို့နေရာတွေမှာ Keyboard shortcuts ကို သုံးရင် Mouse ထက် လုပ်ဆောင်ချက် ပိုသွက်ပေမယ့် - တစ်ချို့နေရာတွေမှာ ကျတော့ Mouse နဲ့ မသုံးရင် လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု ပြီးနိုင်ဖို့ နာရီနဲ့ ချီပြီး ကြာသွားတတ်ပါတယ် -
အဲ့တော့ လူသိပ်စိတ်မဝင်စားတဲ့ Keyboard shortcuts တွေအကြောင်း နောက်ထားပြီး အင်တာနက်ထဲ ဝင်လို့ Webpage ပေါ်ရောက်တဲ့ အချိန် Google Chrome နဲ့ အတူ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ စီမံခန့်ခွဲရာမှာ မှန်မှန်နဲ့ မြန်မြန် ပြီးနိုင်မယ့် Mouse အကြောင်းလေး ရေးချင်မိပါတယ် -
Google Chrome browser နှင့် Mouse ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များ
Mouse လို့ ပြောလိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့ အားလုံးနီးပါးက Left click - Right click ဒီလောက်ပဲ အသုံးများတော့ တစ်ခြား click တွေအကြောင်း မစဉ်းစားမိကြဘူး - ကျွန်တော်တို့ နောက်ထပ် သိထားဖို့လိုတဲ့ Click တစ်မျိုး ကျန်ပါသေးတယ် - ဥပမာ ပြရရင် Middle click / Middle mouse button / Mousewheel
Mouse တစ်ခုမှာပါတဲ့ Middle button က Google Chrome browser မှာ ဘာသုံးလို့ ရမလဲ ??
Google Chrome browser မှာ Mouse ရဲ့ Middle buttom ကို သုံးမယ်ဆိုရင် သာမန် သုံးနေကျ Right click ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ထက်တွေထက် Click ပေးရတာ နှစ်ဆ ပိုသက်သာပါမယ်။ Google Chrome browser မှာ အသုံးပြုနိုင်မယ့် Mouse တစ်ခုရဲ့ Middle button shortcuts စာရင်းကို အောက်မှာ လေ့လာကြည့်ပါ -
( ၁ ) Google Chrome နဲ့ ဖွင့်ထားတဲ့ Web စာမျက်နှာတစ်ခုခုပေါ်က Links တွေပေါ်မှာ Middle button လို့ခေါ်တဲ့ ( နောက်တစ်မျိုးအခေါ် Mousewheel ) ကို Click ပေးရင် အဲ့စာမျက်နှာဟာ New tab အဖြစ်နဲ့ Background မှာပွင့်ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ Links ပေါ်ကို click ပေးတဲ့အချိန်မှာ Middle button အပြင် Shift key ကိုပါတွဲပြီးနှိပ်ထားရင်တော့ အဲ့စာမျက်နှာကို new tab မှာ ဖွင့်ပေးတဲ့အပြင် အဲ့စာမျက်နှာရှိရာဆီကိုပါ တစ်ခါတည်း တွဲခေါ်သွားပါလိမ့်မယ်။
( ၂ ) Menu buttons တြွေဖစ်တဲ့ forward, back, refresh, home buttons တွေကိုလည်း Middle mouse button / Mousewheel နဲ့ click ပေးပြီး New tab အဖြစ်နဲ့ Background မှာပွင့်အောင် စေခိုင်းလို့ ရပါတယ်။
( ၃ ) Google Chrome browser မှာ ဖွင့်ထားတဲ့ tabs တွေကို Middle mouse button / Mousewheel နဲ့ click ပေးပြီး ပိတ်ပစ်လို့ ရပါတယ်။
( ၄ ) Google Chrome browser နဲ့ ဖွင့်ထားတဲ့ Web စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ Ctrl key ကို နှိပ်ထားပြီး Mousewheel ကို ရှေ့ဘက်ကို လှိမ့်ရင် Web စာမျက်နှာက သေးသေးကွေးကွေး အကြောင်းအရာတွေ ကို အကျယ်ချဲ့ပြီး မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ သူ့ ပြောင်းပြန် Ctrl key ကို နှိပ်ထားပြီး Mousewheel ကို နောက်ဘက်ကို လှိမ့်ရင် Web စာမျက်နှာပေါ်က ကြီးကြီးမားမား စာလုံးတွေ/အကြောင်းအရာတွေ သေးသေးကွေးကွေး ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
( ၅ ) Google Chrome browser နဲ့ ဖွင့်ထားတဲ့ Web စာမျက်နှာတွေပေါ်က လွတ်တဲ့ တစ်နေရာမှာ Middle mouse button / Mousewheel ကို နှိပ်ရင် Auto scrolling ဖြစ်ပါတယ် - တစ်ချိန်လုံး Mousewheel ကြီးကို ရှေ့လိှမ့်လိုက် နောက်လှိမ့်လိုက် လုပ်ဖို့ မလိုတော့ဘူးပေါ့ - တကယ်လို့ အထက်အောင် Vertically သွားချင်တာ မဟုတ်ပဲ မျက်နှာစာကျယ်တဲ့ Webpage တွေမှာ အလျားလိုက် Horizontally သွားချင်တာ ဆိုရင် Shift ကို နှိပ်ထားပြီး Mousewheel ကို ရှေ့လိှမ့်လိုက် နောက်လှိမ့်လိုက် လုပ်ပါ - ဒါဆို ဘေးဘယ်ညာ သွားပါလိမ့်မယ် -
Google Chrome browser နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Keyboard shortcuts တွေအကြောင်း လေ့လာချင်ရင်တော့ ဒီနေရာကနေသွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။